Mee An Ebumnuche
Nke mbụ niile, setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ gị, ihe na-eme.
Na anyị ikpe na nke a bụ screenshot nke mbụ video:
Anyị chọrọ soro abụọ ntụpọ (Otu na mkpịsị aka na otu na mkpịsị aka ukwu) na ịtọ a ederede n'etiti ha na-eso ha ogbugbu (inye onye na mmetụta nke tuo na mbugharị).
Ime New mejupụtara na Importing ndị Video
Iji mee ka a ọhụrụ oru ngo, anyị nwere na-eme ka a ọhụrụ mejupụtara. A nwere ike mere site na ịga na menu mmanya wee pịa "mejupụtara", a dobe ala menu ga-apụta, pịa "New mejupụtara" na ahụ setịpụrụ Name, size na oge nke ikpeazụ video. Na nke a, anyị gụrụ ya "Ndepụta" na 5 sekọnd oge.
I nwekwara ike ime nke a site na nri na ịpị "Project" Tab na mgbe ahụ site na ịpị "New mejupụtara".
Ugbu a mbubata a video site na nri ịpị ngo taabụ na mgbe ahụ na ịpị mbubata na mgbe ahụ na ịpị "File", mgbe ahụ, a window ga-emeghe ebe anyị nwere ike na-agagharị anyị video faịlụ.
A video faịlụ nwere ike hụrụ na oru ngo taabụ.
Mbubata a video faịlụ gị mejupụtara, pịa video on oru ngo taabụ na mgbe ahụ ịdọrọ ya ka nsuso taabụ na ala nke Adobe Mgbe mmetụta window.
Anyị nwere ike imeghe tracker site na ịga na menu mmanya na pịa Ohere, mgbe ahụ, na ịpị Tracker (ma ọ bụrụ na ọ na-enyocha).
A Tracker taabụ ga-emeghe na ala nri akuku nke Adobe Mgbe mmetụta window.
Anyị pụrụ ịhụ 4 nhọrọ ebe a, aha ya bụ "Track Igwefoto", "Kechie stabilizer", "Track Motion" na "akawanye Motion". The otu nhọrọ nke anyị na ojiji bụ "Track Motion". Ya mere, anyị ga-pịa ya. Cheta, n'ihu na ịpị "Track Motion" button, na video ga-ahọrọ, ke "Ndepụta" taabụ.
Ọzọkwa, dị ka anyị chọrọ na-edebe ọnụ ọgụgụ na n'akuku, anyị ga-pịa "Ọkwá, adiana na ọnụ ọgụgụ" nhọrọ.
Ebe a na-abịa akụkụ kasị mkpa nke ngagharị nsuso nke a na-"Isetịpụ nsuso ihe".
Ozugbo anyị pịrị na "Track Motion" button, abụọ n'ámá nwere ike hụrụ na ndị mejupụtara window.
Ọ bụrụ na ị na-edebe anya, e nwere square n'ime onye ọ bụla square.
The n'ime square bụ Njirimara mpaghara na elu square bụ search mpaghara.
The atụmatụ mpaghara na-akọwa mmewere ke oyi akwa ka esoro gị. The atụmatụ mpaghara kwesịrị gburugburu a iche visual mmewere, ọkacha mma ihe otu n'ime ihe ke ata ụwa. Mgbe mmetụta pụrụ n'ụzọ doro anya mata track nke oge ịzọpụta maka mgbanwe na ìhè, ndabere na n'akuku.
The search mpaghara na-akọwa na gburugburu ebe ndị Mgbe mmetụta ga-achọ iji chọta esoro atụmatụ. Esoro atụmatụ kwesịrị ịbụ iche naanị n'ime search mpaghara, adịghị n'ime dum eku. Ịhapụ search ka a obere search mpaghara azọpụta search oge na-eme ka search usoro mfe, ma na-agba ihe ize ndụ nke esoro atụmatụ na-ahapụ ndị search mpaghara kpamkpam n'etiti okpokolo agba.
Ugbu a, anyị ga-emekwa ka abụọ ihe. Na anyị ikpe, anyị nwere soro na-egosi na na mkpịsị aka na-isi mkpịsị aka. Ya mere, anyị ga-emekwa ka abụọ ihe na akara.
Na-amalite nsuso, anyị ga-pịa na play button nke a pụrụ hụrụ na ala nri akuku nke window (Tụlee menu).
Na ihe ọ bụla nzi ma ọ bụrụ na tracker aga kwụsịrị track, ọ dịghị ihe na-echegbu onwe banyere. The nsuso nwere ike kwụsịtụ na ike ga-nwesịrị na na ebe ndị square igbe hapụrụ anyị ihe, anyị nwere ike kwụsịtụ etinye trackers ọzọ na n'ókè nke mmasị, mgbe ahụ, anyị pụrụ ịmaliteghachi nsuso.
Iji nweta ezi nsuso, anyị nwere ike soro ihe, etiti site etiti, site na ịpị bọtịnụ ọzọ na-egwu button (na Tụlee menu). Na-elele nsuso etiti site etiti.
Ozugbo nsuso-agwụ agwụ, anyị ga-ahụ a na ihuenyo.
Ịmepụta Null ihe
Ugbu a, anyị ga-eme ka a null ihe na-enye ya nsuso ihe.
N'ihi nke a, anyị ga-nri pịa na nsuso window wee pịa ọhụrụ, mgbe ahụ, "Null ihe".
Iji nye nsuso ihe na tracker, anyị ga-pịa "Dezie lekwasịrị" bọtịnụ na Tracker taabụ. A window ga-apụta, ebe anyị ga-pịa "Layer" na mgbe ahụ na dobe ala menu, anyị ga-họrọ anyị null ihe na pịa "OK".
Mgbe ahụ anyị ga-pịa "Mee" Button na ala n'akụkụ aka ekpe nke window. A window ga-apụta nke kwesịrị nwere "X na Y" na dobe ala menu. Anyị ga-pịa "OK".
Agbakwụnye ihe na-eso Track
Dị ka anyị chọrọ ọ bụla ederede na-eso ngagharị, otú anyị ga-ike ọhụrụ ederede ihe site na nri ịpị na "Ndepụta" windo, mgbe ahụ na "New", mgbe ahụ, "Text".
Anyị ga-ahụ dee ederede na ịtọ ya dị ka ọchịchọ anyị.
Ugbu a, na-eme ka a ederede, na-eso ụzọ, anyị ga-dị nnọọ pịa na gburugburu na akara ngosi na ederede n'usoro, ke "Ndepụta" taabụ na ịdọrọ ya na null ihe oyi akwa.
Anyị ga ugbu a pịa ohere na-egwu video na elele ma anyị nwetara ihe anyị chọrọ ma ọ bụ.
Dị ka ihe niile na-arahụ ziri ezi, anyị nwere ike ugbu a ijere video.
Ijere ndị Video
Ijere video, pịa "mejupụtara" na menu mmanya na pịa "Tinye ijere kwụ n'ahịrị".
A ọhụrụ taabụ ga-egosi na n'etiti ala nke window.
Iji tọọ usoro nke video, anyị ga-pịa "Lossless" nke ga-emeghe windo ebe anyị nwere ike họrọ format na pịa "OK" mgbe nhọrọ.
Ka ebe nchekwa, anyị pụrụ nanị pịa na aha mgbe "mmeputa" n'isi na "Ndepụta" taabụ.
Ná ngwụsị anyị ga-pịa "Na-enyenụ" Button, ke "Ndepụta" Tab.
Anyị Final Video dị njikere-hụrụ.
11 Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka Vine Video Nsogbu
Olee otú iji tọghata Sony HandyCam Video ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
> Resource> Video> otú soro Motion na Adobe Mgbe mmetụta